Myanmar Defence Weapons: တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်များ နှင့် တပ်မတော် (လေ)
Posted by MM at 10:12 AM
U lay aung December 8, 2012 at 5:47 PM
ကို MM ရေ... အားတက်စရာသတင်းအတွက် ကျေးဇူး.... ဒါပေမဲ့ ရန်သူမဟုတ်သေးတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကို ရန်သူလို့ သတ်မှတ်ရေးသားတာ မသင့်တော်သေးဘူးဗျ.... ဘ လောက်ဆိုရင် သိကြပါပြီ....
Win Htut Nandwin December 9, 2012 at 3:22 AM
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ Military industry တွေကိုတည်ထောင်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်။
ကျွန်တော်က Software House တစ်ခုတည်ထောင်ထားတယ်။
IT နှင့်ပတ်သတ်ရင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတွေမှာကူညီချင်တယ်။
Loudspeaker December 9, 2012 at 6:26 AM
Loudspeaker December 9, 2012 at 6:35 AM
sanaythar December 9, 2012 at 8:04 PM
Mi-2 နဲ့ ဆိုးလ်ကိုး နဲ့က ပိုလန်နိုင်ငံက၀ယ်ယူတာလို့ထင်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့သုံး STAR မီးသတ်ကားများကို အမှတ်ရမိမှာပါ။ နံဘေးမှာ အဖြူကွက်သုံးခုပါတဲ့ လေးထောင့်မီးသတ်ကားကြီးများဟာ တစ်ချိန်ကအမြင်ဆန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမီးသတ်ကားများဟာလည်း ပိုလန်နိုင်ငံက၀ယ်ယူတာပါ။ ဆိုးလ်ကိုးတော့ သေချာပေမယ့် Mi-2 တော့ စိတ်ထဲသိပ်မသေချာဖြစ်နေပါတယ်။ ပြောပေးကြပါဦး၊ ကျွန်တော်ထင်တာ မှန်မမှန်။
ကို mm ရထားတဲ့ဓါတ်ပုံတော့ ကောင်းတယ်ဗျာ။ အင်ဂျင်ကာကိစ္စ facebook မှာ အငြင်းပွားနေကြသူတွေလည်း ကျေနပ်သွားကြမှာပါ။ ပိုင်းလော့ Helmet ကနေချိန်တိုင်း စက်အမြောက်လိုက်ချိန်တဲ့ စနစ်တော့ မဟုတ်တာတစ်ခုပဲဆိုးတယ်ဗျာ။ ဘာပဲပြောပြော twin barrel cannon လည်း ကျေနပ်စရာပါ။ အဲဒီအပြင် Jammer System လည်းပါဆိုတော့ ပိုကောင်း။ အဲ Su-35 လေ့လာမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ တော်ပြီဗျာ။ ဒီနေ့အဖို့တန်သွားပြီ။
ZNK December 9, 2012 at 9:43 PM
At the time of soviet invasion into Afghanistan 1979-1989 there was no Taliban. The opposition guerilla movement to Soviet invasion was called Mujahideen and CIA armed them with Stinger to bring down the Mi-8 and Mi-24 piloted by Soviets.
Another point is I agreed with U lay aung. You shouldn't be calling Bangladeshis the "enemy". The worst youcan termed them would be possible adversaries....
koko superdanger December 10, 2012 at 3:45 AM
ကောင်းသတင်းတွေ.... ကြားရတာ နားဝင်ချိုလိုက်တာ ဘာတဲ့ MBT-2000, UAV, SU-35, Mi 35P, Mi28, Ka-50, Ka-52...... BTR-3U, T-72, Nora B-52,Tunguska-M1,Pechora-2M, F-11 အောင်ဇေယျ, F-12 ကျန်စစ်သား, F-21 မဟာဗနုလ, F-23 မဟာသီဟသူရ, 771 UMS အနော်ရထာ, 772 UMS ဘုရင့်နောင်....အကောင်းဆုံးတွေမဟုတ်တောင် အားကိုးရမဲ့ဟာတွေချည်းပဲ။။။ ကိုစနေသားပြောသလို တန်သွာပြီဗျို့ ။
MM December 14, 2012 at 2:44 PM
အပေါ်က အစ်ကိုတို့ရေ... ကျွှန်တော်အနေနှင့် ဘင်္ဂလားကို ရန်သူလို့ရေးတာဟာ သူတို့ဆိုက်တိုင်းမှာလည်း ရေးသလိုပါဘဲဗျာ ထိုင်းကိုလည်း ယိုးဒယားလို့ဘဲရေးနေကြမို့ပါ....။
William Tun Tun Ko December 15, 2012 at 6:03 AM
ကိုMM ဟာ Freelance Blogger တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိသဘောအတိုင်း မိမိခံစားချက်အတိုင်း ဖေါ်ပြနိုင်/ဖေါ်ပြသင့် ပါတယ်၊ ဒါဟာ နိုင်ငံတော်အစိုးရကို ကိုယ်စားပြုတာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် Diplomacy Effect လဲမဖြစ်ပါဘူး၊ ရန်သူဆိုတာ သူတို့ကအရင်စသတ်မှတ်တာပါ ၊ Officially တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ၊ ကျွန်တော် တို့လို တောင်မရောက် မြောက်မရောက် အဆင့်တွေအနေ နဲ့ပေါ့၊ Carry on KMM , I will support you but you know its not only me, all Myanmar Defence Weapons' funs.
MM December 15, 2012 at 1:53 PM
ကျေးဇူးပါ အစ်ကိုရေ... :)
DAYINKAUK December 26, 2012 at 4:19 AM
ကောင်းလိုက်တာဗျာ...အကို့ ဆိုဒ်ကို ကျွန်တော် အခုမှသိတယ်ဗျာ...နောက်ဆို ၀င်ဆွေးနွေးပါဦးမယ်.....
MM December 29, 2012 at 2:00 PM
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ ကြိုဆိုပါတယ်... ဘယ်သူမဆိုဝင်ရောက် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...။
than win tun December 31, 2012 at 8:11 AM
S300 လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလက်နက်တွေရှိပါသလားခင် ဗျာ
Myoe Chit Mg Mg January 13, 2013 at 12:43 AM
ဘာပဲပြောပြော ရတာအကုန်ဝယ်။အ မေရိ ကန်ထုတ် ငရဲမီး ရော့ကဒ်ပါ တပ်ဆင်ပေးနိုင် ရင် ပိုကောင်းမယ်။
Myoe Chit Mg Mg January 13, 2013 at 12:49 AM
ဗထူး January 29, 2013 at 3:27 AM
ကျွန်တော်ကတော့် ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့တော်တော် အားရတယ် ဒီထက်လဲပိုပြီးတော့အဆင့်မြင့်စေချင်တယ် ကျေးဇူးဘဲကို MM ရေ ဒီနေ့ အဖို့ တော့တန်သွားပြီ